Cumar Filish: ”Waxaa laga hortagay weerarro Al-Shabaab ay dooneysay inay ka geysato Muqdisho” | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Cumar Filish: ”Waxaa laga hortagay weerarro Al-Shabaab ay dooneysay inay ka geysato...
Cumar Filish: ”Waxaa laga hortagay weerarro Al-Shabaab ay dooneysay inay ka geysato Muqdisho”
Muqdisho (Halqaran.com) – Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Cumar Maxamed Maxamuud (Cumar Filish) ayaa sheegay inay ka hortageen weeraro Al-Shabaab ay doonayeen inay ka gaystaan Muqdisho.
Duqa Muqdisho ayaa sheegay in Al-Shabaab ay isku dayeen bur burinta goobaha Bulshada isugu timaado, islamarkaana Ciidamada ammaanka arrimahaasi ay ka hortageen.
Waxa uu sheegay Muqdisho inay yaalaan Koontaroolo badan oo lagu hubiyo gaadiidka, islamarkaana Shabaab ay awoodi waayeen gaari qarax Magaalada inay soo galiyaan.
“Waxaa ay mareysaa in Al-Shabaab ay u suuro geli weysay inay burburiyaan meelaha Bulshada loogu adeego, waxaana sameynay koontoroolo farabadan oo amniga laga ilaaliyo, waxaana dowladda ka go’an inay ka hortagto weerarada Al-Shabaab ayuu yiri.”Ayuu yiri Duqa Muqdisho
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ayaa shacabka Muqdisho uga mahadceliyay wada shaqeyn uu sheegay inay la leeyihiin laamaha ammaanka, islamarkaana arrimahaasi guulo lagu gaaray.
Waxay aheyd Arbacadii shalay markii Isgoyska Sayidka uu ka dhacay Qarax gaari loo adeegsaday, halkaasi oo ay ku dhinteen Shan ruux oo uu ku jiro Agaasime ka tirsan dowladda Federalka Soomaaliya.
weeraro Al Shabaab ayaa laga hortagay